Dataset များ (7)
မြန်မာ (6) လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရ... (1)
CSV (3) SHP (2) DB_TABLE (1) GeoJSON (1) GeoTIFF (1) HTML (1) TIFF (1) WMS (1) XLSX (1)
Open Development My... (6) Open Development Laos (1)
လူနေမှုဘဝနှင့် သက်ဆ... (7) လူဦးရေ (5) ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု (2) မြေယာ (2) ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး (2) ပညာသင်ကြားနိုင်မှု (1) ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာ... (1) အုပ်ချုပ်ရေး (1) စိုက်ပျိုးထုတ်ကုန်မ... (1) စိုက်ပျိုးရေး (1) ကူညီထောက်ပံ့မှုနှင့... (1) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ (1) စွမ်းအင် (1) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (1) စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ... (1) စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု (1) အတည်ပြုခန့်အပ်ထားသေ... (1) ကျား၊မ သဘော (1) ဆေးရုံနှင့် ဆေးခန်း... (1) မူလတန်းနှင့် အလယ်တန... (1) လမ်း၊ တံတားများ (1) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိ... (1) ရေနှင့် မိလ္လာရေဆို... (1)
Creative Commons At... (5) CC-BY-4.0 (1) unspecified (1)
ခေါင်းစဥ်များ: Demographics None: dataset
မြန်မာ 2019၊ 28 ဒီဇင်ဘာ ရင်းမြစ်: https://energydata.info/dataset/myanmar-cities-and-town-location-wi... လူနေမှုဘဝနှင့် သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များ, လူဦးရေ
ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ကူညီထောက်ပံ့မှုဖြင့်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော ၂၀၃၀ မတိုင်မီ နိုင်ငံသားတိုင်းလျှပ်စစ်မီးရရှိရေးနိုင်ငံတော်အဆင့်စီမံ ကိန်းအားကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရ...
မြန်မာနိုင်ငံ - အခြေချနေထိုင်မှုများ/လူဦးရေနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ
မြန်မာ 2021၊ 17 မေ ရင်းမြစ်: https://energydata.info/dataset/myanmar-populated-settlements-data လူနေမှုဘဝနှင့် သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များ, လူဦးရေ
ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ငွေကြေးအကူအညီဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား/နိုင်ငံတော် အဆင့် လျပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေး စီမံကိန်း (Myanmar National Electrification Plan - NEP)၏ အစိတ်...
မြန်မာ 2020၊3ဇန်နဝါရီ ရင်းမြစ်: Statistical Yearbook 2014 for Education Data, Township Health... ဆေးရုံနှင့် ဆေးခန်းများ, ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်လျှောက်မှုများ ရရှိနိုင်မှု, ပညာသင်ကြားနိုင်မှု, ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး, လူနေမှုဘဝနှင့် သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များ
ဤအချက်အလက်အစုတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်နယ် / တိုင်းဒေသကြီးနှင့် မြို့နယ်များရှိလူဦးရေအချိုးအစားဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပညာရေး၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအခြေခံ အဆ...
မြန်မာ 2020၊3ဇန်နဝါရီ ရင်းမြစ်: Data sources can be found in IndicatorList file. ကူညီထောက်ပံ့မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ကျား၊မ သဘော, စိုက်ပျိုးရေး, စွမ်းအင်, ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး, မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်းပညာရေး, မြေယာ, ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု, ရေနှင့် မိလ္လာရေဆိုးကိစ္စများ, လမ်း၊ တံတားများ, လူနေမှုဘဝနှင့် သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များ, လူဦးရေ, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ, သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦနှင့် အထောက်အပံ့များ, အတည်ပြုခန့်အပ်ထားသော အလုပ်သမား, အုပ်ချုပ်ရေး
သတင်းအရင်းအမြစ်အမျိုးမျိုးမှအညွှန်းကိန်းပေါ်င်း ၂၀၀ ကျော်ခန့်အားမြန်မာနိုင်ငံ သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှု ဌာန (MIMU) မှရှာဖွေစုဆောင်းထားပြီးအဆိုပါအချက်အလက်အစုများကိုသက်ဆိုင်ရာ ...
မြန်မာ 2019၊ 29 ဒီဇင်ဘာ ရင်းမြစ်: http://www.worldpop.org.uk/ လူနေမှုဘဝနှင့် သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များ, လူဦးရေ
၁၀၀မီတာ resolution ဖြင့် pixel နှုန်းလူဦးရေသိပ်သည်းဆ - WorldPop သည် အနိမ့်ဆုံးနှင့်အလယ်အလတ် ဝင်ငွေရှိသောတိုင်းပြည်တိုင်းအတွက် ၁၀၀x ၁၀၀ မီတာဇယားကွက်၌‌နေထိုင်သောလူဦးရေကိုခန့်းမှန်...
မြန်မာ 2019၊ 29 ဒီဇင်ဘာ ရင်းမြစ်: http://www.worldpop.org.uk/data/summary/?contselect=Asia&countselec... လူနေမှုဘဝနှင့် သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များ, လူဦးရေ
ခန့်မှန်းခြေလူဉီးရေအလွှာများ- Alpha version 2010, 2015 နှင့် 2020 ခန့်မှန်းလူအရေအတွက် per pixel ('ppp') နှင့်တစ်ဟက်တာလျှင်လူဦးရေအရေအတွက် ('pph') ခန့်မှန်းထားပြီး အမျိုးသားစုစုပေ...
လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ 2018၊ 15 ဖေဖော်ဝါရီ ရင်းမြစ်: Food and Agriculture Organisation of the United Nations စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု, မြေယာ, ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု, လူနေမှုဘဝနှင့် သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များ
This data set profiles the various country indicators for the Lao People's Democratic Republic by the FAO. There are datasets available on: Demographics, Agricultural Inputs,...